YouTube SEO - YTpals सुधार गर्न भिडियो कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने द्रुत तरिकाहरू
YouTube SEO सुधार गर्न भिडियो कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने द्रुत तरिकाहरू
YouTube सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू मध्ये एक हो र विश्वव्यापी भिडियो स्ट्रिमिङको लागि अग्रणी प्लेटफर्म हो। वरपर संग 2.29 बिलियन मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू, युट्युब फेसबुक पछि दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्मले सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री प्रदर्शन गर्न धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ, र यो ब्रान्ड मार्केटिङको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्ति र व्यवसायहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको धेरै दर्शकहरूलाई उनीहरूले सकेसम्म पुग्नु र दर्शकहरूको संलग्नता बढाउनु हो। विभिन्न YouTube SEO दर्शकहरू सम्म पुग्न सान्दर्भिक किवर्डहरू फेला पार्न प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस लेखले YouTube मा कुञ्जी शब्दहरू कसरी प्रयोग गरिन्छ र कुञ्जी शव्दहरू अनुसन्धान गर्ने उत्तम तरिकाहरू पत्ता लगाउँदछ।
YouTube भिडियो कुञ्जी शब्दहरूले तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएको भिडियोको शीर्षक र विवरणमा सामान्यतया पाइने विशिष्ट शब्दहरू वा वाक्यांशहरूलाई जनाउँछ। YouTube एल्गोरिथ्मले यी कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्दछ जुन भिडियो सान्दर्भिक खोजहरूका लागि सिफारिस गरिएको हो भनेर निर्धारण गर्न। कुञ्जी शब्दहरू एकल-शब्द वा बहु-शब्द वाक्यांशहरू हुन सक्छन्। यद्यपि, लामो पुच्छर कुञ्जी शब्दहरू सामान्यतया एक-शब्द वा छोटो कुञ्जी शब्दहरू भन्दा राम्रो रूपान्तरण दरहरू प्रस्ताव गर्न जानिन्छ।
भिडियोको लागि सान्दर्भिक कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नाले खोज परिणामहरूमा उच्च माथिको विशेषता हुने सम्भावना बढाउन सक्छ, त्यसैले भिडियो कुञ्जी शब्द अनुसन्धान आवश्यक छ। तपाईंले शब्दहरू र वाक्यांशहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन मानिसहरूले प्राय: अनुसन्धान मार्फत भिडियो अनलाइन खोजी गर्न प्रयोग गर्छन्। YouTube सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने भिडियो खोज इन्जिनहरू मध्ये एक हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, तपाइँका लक्षित दर्शकहरूले तपाइँका भिडियोहरू खोज्ने सम्भावना धेरै उच्च छ। YouTube लाई हरेक दिन लाखौं मानिसहरूले मेकअप, खेलकुद, व्यवसाय र थप कुराहरू खोज्न प्रयोग गर्छन्। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको बजारमा ट्याप गर्न र तपाईको भिडियोको दृश्यता बढाउनको लागि सही भिडियो कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नु हो।
YouTube भिडियो कुञ्जी शब्दहरू कसरी फेला पार्ने
सामग्रीको खोजी गर्दा दर्शकहरूले प्रयोग गर्ने सही भिडियो कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्नाले तपाईंको सामग्रीको दृश्यतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बढाउन सक्छ। धेरै YouTube SEO प्रविधिहरूले तपाईंलाई भिडियोहरू अनुकूलन गर्नका लागि यी भिडियो कीवर्डहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंले भिडियो कुञ्जी शब्दहरू खोज्न सक्ने केही तरिकाहरू हेरौं।
1. YouTube को स्वत: पूर्ण सुविधा
जब प्रयोगकर्ताहरूले YouTube मा केहि खोज्छन्, खोजी बाकसले सामान्यतया विशिष्ट किवर्डहरू सुझाव दिन्छ, जसलाई YouTube Autocomplete भनिन्छ। YouTube स्वत: पूर्ण सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो कुञ्जी शब्दहरू मात्र बताउँछ, जसको मतलब तिनीहरू तपाइँको भिडियो सामग्री अनुकूलन गर्नका लागि उत्तम कुञ्जी शब्द विकल्पहरू हुन्। तपाईंले तिनीहरूलाई भिडियो शीर्षक वा विवरणहरूमा थप्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको च्यानलको लागि थप लाइक, टिप्पणीहरू, र सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। YouTube Autocomplete मार्फत पहिचान गरिएका कुञ्जी शव्दहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको तिनीहरूलाई क्रमबद्ध गर्न सजिलो हुनेछ। Autocomplete मा धेरैजसो सुझावहरूमा लामो-पुच्छर कुञ्जी शब्दहरू हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू प्रतिस्पर्धी छैनन्।
2. प्रतियोगीहरूको शीर्ष भिडियोहरू
भिडियो कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने अर्को उत्कृष्ट तरिका प्रतिस्पर्धीहरूको शीर्ष-प्रदर्शन भिडियोहरू मार्फत हो। यी कुञ्जी शब्दहरू प्रतिस्पर्धीहरूको लागि पहिले नै प्रभावकारी साबित भइसकेकाले, तिनीहरूलाई तपाईंको भिडियोमा समावेश गर्नु अर्थपूर्ण हुनेछ। यस तरिकाले कुञ्जी शब्दहरू पहिचान गर्न, पहिलो चरण भनेको तपाइँको च्यानलको आकारको बारेमा प्रतिस्पर्धी YouTube च्यानलहरू फेला पार्नु हो। भिडियो खण्डमा, तिनीहरूको भिडियोहरू सबैभन्दा लोकप्रिय अनुसार क्रमबद्ध गर्नुहोस् र तिनीहरूको भिडियो शीर्षक र विवरण मार्फत कुञ्जी शब्दहरू छान्नुहोस्। यदि तपाइँ स्क्र्याचबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एक उपयोगी विधि हुनेछ।
3. प्रतिस्पर्धीको वेबसाइटमा भिडियो ट्यागहरू
प्रतियोगीहरूको वेबसाइटहरूमा कुञ्जी शब्दहरू खोज्ने राम्रो तरिका भिडियो ट्यागहरू हेरेर हो। भिडियो ट्यागहरू सामान्यतया सार्वजनिक रूपमा देखाइँदैन। यद्यपि, तपाइँ वेब पृष्ठको HTML कोड मार्फत ट्यागहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। यस विधिको लागि, तपाइँ भिडियो पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ र दायाँ क्लिक गरेपछि डाउन ड्रप मेनुबाट "पृष्ठ स्रोत हेर्नुहोस्" छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। HTML कोड तपाईलाई देखाइनेछ, र तपाईले खोजी विकल्प (कमान्ड + एफ र CTRL + F) कोडमा "कीवर्डहरू" खोज्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईंले भिडियोको लागि YouTube द्वारा प्रयोग गरिएको सटीक ट्यागहरू फेला पार्नुहुनेछ।
यी सजिलो विधिहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले कुनै पनि समयमा भिडियो कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्नुहुनेछ र खोज परिणामहरूमा तपाईंको सामग्रीलाई अनुकूलित गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ थप लक्षित दृष्टिकोण खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ YouTube भिडियो एसईओ द्वारा प्रस्तावित प्रिमियम सेवा किन्न सक्नुहुन्छ YTpals। यस सेवा मार्फत, तपाईंलाई हाम्रा विशेषज्ञहरूद्वारा पूर्ण भिडियो मूल्याङ्कन दिइनेछ, जसले तपाईंलाई अझ बढी SEO-मैत्री शीर्षक र विवरण प्रदान गर्नेछ। तपाईलाई पाँच कीवर्ड वा ह्यासट्यागहरू पनि प्रदान गरिनेछ, जुन राम्ररी अनुसन्धान गरिएको छ। यो सबै होइन। YTpals ले अन्य धेरै YouTube सेवाहरू प्रदान गर्दछ नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू, लाइक र सब्सक्राइबरहरू, जुन तपाईंको च्यानललाई सफलताको बाटोमा राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। YTpals द्वारा प्रस्तावित सेवाहरूको बारेमा थप जान्नको लागि, आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
YouTube SEO सुधार गर्न भिडियो कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने द्रुत तरिकाहरू YTpals लेखकहरू द्वारा,2फेब्रुअरी 2022
यहाँ तपाईंलाई YouTube को भिडियो निर्माता बारे जान्नु आवश्यक छ
प्रोमोशनल यूट्यूब भिडियो को निर्माण छिटो बनाईयो त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि आजकल भिडियोले अनलाइन संसारमा शासन गरिरहेको छ। Percent 85 प्रतिशत मार्केटरहरू दावी गर्छन् कि भिडियो अनलाइनमा ध्यान आकर्षण गर्न अत्यधिक प्रभावी साबित हुन्छ ...
2005 मा यसको सुरुवात पछि, YouTube इन्टरनेटमा भिडियो स्ट्रिमिङको लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने माध्यम भएको छ। २०२० सम्म, विश्वभर करिब २.१ बिलियन मानिसहरू YouTube प्रयोग गरिरहेका छन्। के को रूपमा शुरू भयो ...
उत्कृष्ट भिडियो विचारहरू तपाईंको YouTube सदस्यहरूले2मिनेट भन्दा कम मन पराउनेछन्
यदि तपाईं आफ्ना दर्शकहरूको ध्यान खिच्न चाहनुहुन्छ भने, छोटो YouTube भिडियोहरू उत्तम विकल्प हुन्। यो फेला परेको छ कि मानिसहरूले छोटो-फारम भिडियो सामग्री साझा गर्ने अन्य कुनै पनि प्रकारको भन्दा दोब्बर दर…